IMacOS 10.12.5 Beta, iWozniak iyathetha ngeApple, umdlalo wokuqala weStarcraft, kunye nokuninzi. Okona kulungileyo kule veki kwiSoydeMac | Ndisuka mac
Kwiveki ephelileyo esishiye kuyo ngo-Epreli ngaphambili kwaye iApple iyaqhubeka nezicwangciso zayo zokungafezekisi naliphi na igama eliphambili kude kube kukwaziswa kwakhona. Kuyinyani ukuba bakhuphe uhlaziyo lwe-iPad kunye nabanye, kodwa kubonakala kuyinto engaqhelekanga kuthi ukungabinayo intetho ephambili ngeli xesha kubafana baseCupertino. Nangeyiphi ndlela into esinayo ngaphambili ibonakala intle kakhulu emva kukaPhil Shiller, ethethile ngeeMacs, iApple Park, uHlelo oluKhethekileyo lwe-iPhone nabanye. Kule veki yokugqibela ka-Epreli sizibonile iindaba ezibalulekileyo kwaye ngoku ukuzola kweCawa siza kubona ezinye zazo.
Chukumisa ukuqala ngohlobo IMacOS Sierra 3 beta 10.12.5 eya kuthi ngokuqinisekileyo ibe luhlobo lokugqibela okanye lokuphela kwenkqubo yokusebenza ngaphambi kweWWDC yalo nyaka. Ngokwam ndicinga ukuba sijongane nohlobo lwamva nje kuba iindaba ziya kugcinwa ngoJuni kwaye kusele inyanga emfutshane. Siza kubona ukuba akukho ziphene kwaye Ukuba yonke into ihamba ngokwesicwangciso, asikholelwa ukuba baya kuphehlelela i-10.12.6 betas kodwa oku ngeApple ngekhe uyazi.
Ezi ndaba zilandelayo ziza ngohlobo lwe Ingxelo evela ku-Apple Co-Founder uSteve Wozniak. I-Woz icacile ukuba i-Apple iya kukhula ngakumbi ngokucacileyo kwixesha elizayo kwaye le yinto abahlalutyi abaninzi abakholelwa kuyo dNgenxa yamandla okuthenga kwenkampani ngokuyinxalenye nangaphezulu kwako konke ngenxa yeemveliso zayo.
Umdlalo wokuqala weStarcraft ngoku ukhululekile ukukhuphela ye-Mac kwaye ziindaba ezimnandi kubo bonke abo bakhe badlala umdlalo weqhinga lomkhosi. Ngale ndlela, yinguqulelo yoqobo kwaye kulindeleke ukuba uhlaziyo lomdlalo wasentsomini uza kufika.
I-Apple Music ikhupha inkqubela phambili kwiinyanga nje ezidlulileyo nangoku Uya kufumana amalungelo akhethekileyo kwi-documentary malunga noClive Davis. I-Apple icacile malunga namanyathelo ekufuneka elandelwe ngenkonzo yomculo esasazayo.
Kwaye ukugqiba siyacebisa ividiyo yakutshanje yeApple Park abayenzileyo ngedrone kwindawo ebiyelweyo apho kufutshane kakhulu nesakhiwo. Kule meko kananjalo ungabona ukuba i «SpaceShip» ijongeka kanjani ebusuku kwaye iyamangalisa ngokwenene.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » IMacOS 10.12.5 Beta, iWozniak incokola ngeApple, umdlalo wokuqala weStarcraft, kunye nokuninzi. Eyona veki igqwesileyo eSoydeMac
Yonwabela iNetflix ngoMdlali osasazayo, simahla ixesha elilinganiselweyo